AZG ရုံး ပြန်ဖွင့်ရေး မောင်တော ပြည်သူများ လက်မခံ | ဧရာဝတီ
AZG ရုံး ပြန်ဖွင့်ရေး မောင်တော ပြည်သူများ လက်မခံ
ငြိမ်းချမ်း| October 15, 2012 | Hits:4,523
| | ၂၀၁၂ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများအတွင်း နေအိမ်မီးရှို့မှုများ၊ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဒေသခံများ ရွှေ့ပြောင်းနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ကျန်မာရေး အကူအညီပေးနေသည့် AZG (Artsen zonder Grenzen) အဖွဲ့ရုံးများ ပြန်ဖွင့်ရေးကို ယင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသော်လည်း ပြည်သူအများစုက လက်မခံကြကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောမြို့ မြို့မကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် AZG က ရခိုင်များအတွက် ဆေးခန်းနှင့် ဘင်္ဂါလီများအတွက် ဆေးခန်း သီးခြားဖွင့်ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း လက်မခံဘဲ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူ မြို့ခံ ဦးမောင်မောင်သိန်းက ပြောသည်။
“သူတို့က ရခိုင်အတွက် ဆေးခန်း၊ ဘင်္ဂါလီအတွက် ဆေးခန်းဆိုပြီး ခွဲခြားဖွင့်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကို တက်ရောက်တဲ့လူတွေက ဒီလိုသာ ခွဲခြားထားမယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန်မှာ ကျောင်းတခြား၊ ဆေးခန်းတခြား၊ လမ်းတခြား ဖြစ်လာမယ်။ ဒါဟာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ထောက်ပြကြတယ်။ တကယ်လို့ လုပ်ချင်ရင် မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှာသာ လုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်ကြပါတယ်။ ဒါကို သူတို့က အထက်ကို တင်ပြပေးမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်” ဟု ဦးမောင်မောင်သိန်းက ပြောသည်။
AZG အဖွဲ့သည် နယ်သာလန် အခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်များအတွင်း တီဘီရောဂါ၊ တခြား ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသူများကို ကုသပေး၊ ဆေးဝါးကူညီပေးနေသကဲ့သို့ ငွေကြေးလည်း အထောက်အပံ့ပေးနေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ AZG တာဝန်ခံ၊ ၎င်း၏ စကားပြန်တဦး၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တဦး၊ ရခိုင်များဘက်မှ မြို့မကျောင်း ဆရာတော်၊ အောင်ဗလကျောင်း ဆရာတော်၊ အောင်မြေဗောဓိ ဆရာတော်၊ သုံးမိုင် ဆရာတော်နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ ၁၀၀ ခန့် တက်ရောက်သည်။
AZG ကို ရုံးပြန်ဖွင့်ရန် လက်မခံလိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောင်ဗလကျောင်း ဆရာတော်က “AZG ရဲ့ စည်းကမ်းမှာတော့ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ကူညီပေးတယ်ဆိုပြီး ပြောပေမယ့် လက်တွေ့ ကူညီတဲ့အခါ ဘင်္ဂါလီ ၉၀၊ တိုင်းရင်းသားက ၁၀ ယောက်လောက်ပဲ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်လည်း သူတို့ ရုံးပြန်ဖွင့်လာရင် ဒီအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်သွားမှာကို ဆရာတော်တို့ အပါအ၀င် တက်ရောက်တဲ့ လူတွေအားလုံးက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်မခံကြတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မိန့်သည်။
AZG သည် ရခိုင်ဒေသတွင် ၁၈ နှစ်ကြာ လှုပ်ရှားခဲ့သော်လည်း ရခိုင်ဒေသခံအများစုက ယင်းအဖွဲ့ကို မသိရှိကြောင်း၊ ရခိုင်လူမျိုးများ၏ အမြင်တွင် AZG သည် မွတ်စလင်များကိုသာ အကူအညီပေးနေသည့် အဖွဲ့ဟု မြင်နေကြောင်း ဒေသခံများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများကြောင့် AZG ရုံးများ အားလုံး ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီး မောင်တောမြို့ ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်မကောင်းသည့်တိုင် အစိုးရပိုင်းနှင့် အဆင်ပြေအောင် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း မောင်တောမြို့ AZG အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်သူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ပြန်ဖွင့်ဖို့ကိစ္စကို မောင်တောမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တက်ရောက်တဲ့ လူတွေက လက်မခံဘူး။ လက်မခံပေမယ့် ရုံးတွေ ပြန်ဖွင့်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားနေကြတယ်။ အခုတော့ ဘယ်နေရာမှ ပြန်မဖွင့်ဖြစ်သေးပါဘူး။ ပြန်ဖွင့်နိုင်အောင်တော့ သူတို့ လုပ်ဆောင်ကြမှာပါ” ဟု ဦးသိန်းထွန်းဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဇွန်လက စတင်ဖြစ်ပွားသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခတွင် AZG မှ ဝန်ထမ်းတချို့ ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဆိုတာ အစိုးရက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
မဒေးကျွန်းဒေသခံများ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း တရုတ်ကုမ္ပဏီက လမ်းစဖောက်ဖားကန့်၌ အလုပ်လာရှာသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ပြန်ပို့ခံရဆူပူမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ရခိုင် ၁၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရစစ်တွေ လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူမှု ပြန်စမည်အနာကြီးရောဂါသည်များ ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးရေး လွှတ်တော်တွင် တင်ပြမည့်သူ မရှိဟုဆို နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Aung Zaw Oo October 16, 2012 - 9:45 am	ကို မိုးသီးဇွန်ပြောတဲ့စကားလေးတွေကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ ဂျာမနီ နာဇီလက်ထက်တုန်းက ပြည်သူတွေအားလုံး ဟစ်တလာ နောက်ကရူးသွားသလို မြန်မာ ပြည်သူတွေကလည်း ရူးသွားနေပြီးလား။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ UN ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံ မဟုတ်ဘူးလား။
Reply	Joe Nay Joe October 16, 2012 - 7:56 pm	96% of population in Maungdaw are Rohingya… Rakhine comprises of only 4%… if AZG treat 90 Rohingya and 10 Rakhine, how come AZG taking Rohingy’s side? NGOs work is to help the needy one.. Rohingya need their help as they can’t move from village to village without permit….all the rakhine mogh got mad…. foolish people in deed!!
Reply	Thomas chang October 16, 2012 - 8:26 pm	What is your point?Do you have your own word?
Reply	K October 17, 2012 - 2:50 am	ရခိုင်ကိုတောင်ရောက်ဖူးရဲံ့လား
Reply	kotoe October 18, 2012 - 10:43 am	aung zaw oo who is moe thi zon?Did you know him ?and what did he do?If you like to know please come to mae sod you must know all.Just he talk didn’t work all ABSDF have known.
Reply	mr TM October 24, 2012 - 9:01 pm	AZGဆေးခန်းကိုရခိုင်ပြည်မှာမဖွင့်ဖို့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တားဆီးချက်ကဘင်ဂါလီလူမျိုးတွေကိုမကူညီစေချင်လုိ့ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။OICနဲ့UNကစေလွတ်တဲ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းဘင်ဂါလီတွေကိုပိုပြီးကူညီလို့ဆိုပြီပိတ်ခိုင်းတယ်။ဒါတွေဟာလူသါးခြင်းမစါနာတဲ့ရိုင်းဆိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေဘဲရခိုင်ဒုက်ခသယ်တွေကိုကြတော့အစါးအသောက်ပြေ့ပြေ့စုံစုံပေးနေပြီးဘင်ဂါလီတွေကြတော့မလိုအပ်သလိုဘက်စုံကနေပြီးပိတ်ပင်နေတာကလူမဆန်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဗိုလ်သိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဖြစ်စေချင်နေတာဘဲ။တရားဥပဒေစီုးမိုးရေးဆိုတာမြန်မာပြည်မှာအခုထက်ထိမရှိသေးပါဘူ။